राखेपमा खेलकुद विश्वविद्यालयसम्बन्धी कार्यदल गठन - Nepal Bahas Nepal Bahas
राखेपमा खेलकुद विश्वविद्यालयसम्बन्धी कार्यदल गठन
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७९, मंगलवार १७:०६
७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ‘राखेप’ ले खेलकुदको समग्र विकासका लागि खेलकुदसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरी व्यवस्थित अध्यापन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी खेलकुद विश्वविद्यालयसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४२ को उपदफा १ अनुसार ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलका सदस्यहरुमा गीता क्षेत्री राणा, युवराज लामा, रमेशराज पन्त, ओमकृष्ण प्रसाईं, डा. शुभेन्दु गुप्ता, रवि राजकर्णिकर, सूर्यबहादुर अधिकारी, नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ, सुमन डिसी, सुजिना गुरुङ, डा. अचुतम लामिछाने र हरिहर श्रेष्ठ रहेका छन् ।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले उनीहरुलाई मंगलबार पत्र हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘योजना बनाउन जरुरी छ, त्यो भन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण पाटो योजनालाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउनु हो । कार्यदलमा विज्ञ र अनुभवी हुनुहुन्छ । यहाँहरुबाट मैले धेरै आशा गरेको छु ।’
एन्फामा किरण महासचिव, रवीन्द्र कोषाध्यक्षमा मनोनीत
के होला प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको नेपाल भविष्य, गर्ला त एन्फाले बर्खास्ती ?
यस्ता छन् कर्माको चिरप्रतिद्वन्द्वी एन्फा अध्यक्ष पंकजका चुनौती